RetroArch 1.9.0 yakatoburitswa kare uye inouya nekumwe kugadzirisa | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura vhezheni itsva ye de inozivikanwa emulator interface "RetroArch 1.9.0»Mune shanduko shoma dzakakosha dzakawedzerwa, asi pakati pezvakawedzerwa zvinomira semuenzaniso basa rakaitwa rekuvandudza kushandisa ndangariro (reduce) nediski
Kune avo vasingazive neRetroArch, iwe unofanirwa kuziva kuti izvi inobvumira kutevedzera kwakasiyana-siyana mutambo wekunyaradza, kubvumira mitambo yechinyakare kumhanya neyakareruka uye yakabatana graphical interface.
MuRetroArch se inotsigira kushandiswa kweanonyaradza emulators senge Atari 2600/7800 / Jaguar / Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64 / DS, PCEngine, PSP, Sega 32X / CD, SuperNES, nezvimwe.
Gamepads kubva aripo emitambo nyaradzo inogona kushandiswa, inosanganisira Playstation 3/4, Dualshock 3, 8bitdo, XBox 1, uye XBox360 / One, pamwe neyakajairika-chinangwa gamepads seLogitech F710.
Emulator inotsigira epamberi maficha senge mitambo yevazhinji, chengetedza chimiro, chekare mutambo wemufananidzo unosimudzirwa nemumvuri, mitambo yekudzosera kumashure, inopisa plug plug mutambo uye vhoriyamu kutenderera.
1 Chii chitsva muRetroArch 1.9.0?
2 Maitiro ekuisa RetroArch paLinux?
Chii chitsva muRetroArch 1.9.0?
Mune iyi vhezheni nyowani zvakasimbiswa izvo akawedzera "Ongorora" playlist kuratidza mode kusarudza zvirimo muunganidzwa wemuno, uchifunga metadata iri mudura reLibretro.
Nayo inogona kusefa nematanho akadai se nhamba yevatambi, musimudziri, muparidzi, system, nyika kwaakabva, gore rekuburitsa uye genre.
Mukuwedzera kune iyo zvakare akawedzera kwakareruka kwekutsvaga muzvinyorwa zvekutamba:
Paunenge uchiona playlist, mushandisi anodhinda RetroPad X (kana /, nezvimwewo) senguva dzose uye anopinda mukutsvaga
Iyi inova firita - zvese zvinowirirana zvinyorwa zvinoratidzwa
Mushandisi anogona kumhanyisa kumwe kutsvaga kuti awedzere kunatsa mhedzisiro. Huwandu hwesarudzo dzemafirita dzinogona kuiswa munzira iyi
Kudzvanya 'kukanzura' kunobvisa firita yekupedzisira yakapinda
Pane rimwe divibasa rakawanda rakaitwa kudzikisa ndangariro kushandiswa uye kuderedza I / O disk yekushanda senge kurodha mafaira ekugadzirisa uye zvinyorwa zvekutamba.
Zvakare mushanduro iyi nyowani, tinogona kuwana izvo kudonhedza rondedzero kwakaitwa kuti ikurumidze kiyi rondedzeropamwe nechinongedzo chechinzvimbo chazvino mune yakavakirwa-mukati yevhidhiyo mutambi uye mhenyu yakawedzerwa kana uchirodha zvemukati.
Iyo nyowani yekufambira mberi yekufukidzira bhaa yakawedzerwa kune iyo ffmpeg kernel (yakadzamidzirwa muRetroArch yeWindows / Linux).
Yakagadziriswa nyaya nekutsvaga mashandiro akaganhurirwa kune poindi 1 sekondi pamberi pekupera kwefaira, uye kana mushandisi akaedza kutsvaga kupfuura kumagumo, iyo faira ichatanga kubva pakutanga.
Yakagadzirisa akati wandei makuru ndangariro kudonhedza kana uchivhura mavhidhiyo
Kuvandudzwa kwakaitwa kumenyu.
Finalmente kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve iyi nyowani vhezheni, unogona kutarisa ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Maitiro ekuisa RetroArch paLinux?
Kuisa iyo RetroArch arcade emulator paLinux isu tinotsigirana nekuisirwa kuburikidza neSnap, nekuti izvi zvinodikanwa kuti uve nerutsigiro rweiyi tekinoroji yakaiswa mune yako system.
Kuisa mune yedu system, isu tinongofanirwa kuvhura terminal uye unomhanya unotevera kuraira:
Uye neizvi isu tinongomirira kuti itore pasi mapakeji anodikanwa uye timirire kuti iise, maitiro aya anogona kutora maminetsi mashoma.
Kana izvi zvaitwa, isu tinongoenda kumenu yekushandisa uye isu tiri kutsvaga RetroArch kukwanisa kuzviita mune yedu system.
Kana iwe uchitova neRetroArch yakaiswa neiyi nzira, unogona kuigadziridza nemirairo inotevera:
Zvino hongu ivo vanoshandisa yavo keyboard uye mbeva kutamba yavo yavanofarira mazita ivo havafanirwe kuve nedambudzikoKunyangwe kana vakashandisa kure kure kuburikidza neBluetooth kubatana, RetroArch inofanira kuzviziva uye kuvabvumira kuti vazvigadzirise pasina dambudziko
Kunyange zvakadaro Kana iwe uchizoshandisa iri kure yakabatana kuburikidza neUSB, uchave uine imwe setback iyo RetroArch haina kuiziva.
Ndokusaka vachifanira kuwedzera imwe rutsigiro rweizvi. Ivo vanofanirwa kuvhura terminal uye voita inotevera mirairo:
Iye zvino RetroArch inofanira kunge yatoziva iyo USB kutonga iyo inogona kutogadzirirwa mukushandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » RetroArch 1.9.0 yakatoburitswa kare uye inouya nekumwe kugadzirisa
Kunetsekana muQualcomm neMediaTek inobvumira kubatwa kwechimwe chikamu cheWPA2 traffic